Shabaab oo weeraray degaanka Basra | SHABAKADA GOBSOOR
Shabaab oo weeraray degaanka Basra
Published on November 8, 2017 by admin · No Comments
Dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-shabaab oo abaabulan ayaa galabta waxa ay weerar saf balaaran ah ku ekeeyeen fariisin Ciidanka Dowladda ay ku leeyihiin degaanka Basra oo ka tirsan degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dagaalka labada dhinac oo socday mudo saacado ah ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan, sida uu soo sheegayo Wariyaha warbaahinta Risaala ee degmada Balcad.
Dadka degaanka oo xiriiro kala duwan ay la sameysay Risaala ayaa waxa ay sheegeen saldhigan la weeraray in ay ku sugnaayeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan Millitariga Dowladda Soomaaliya.
Ilaa hadda si dhab ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Dagaalka dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Shabaab, balse waxaa jira khasaare kala duwan oo dhinacyadan soo kala gaaray.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay inoo sheegeen in weerarka uu jiro, Ciidamadana ay la dagaalameen raggii soo weeraray, wixii faah faahin ahna ay dib ka bixin doonaan.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya degaanka Basra ayaa waxa ay sheegayaan Shabaabkii weerarka soo qaaday in ay dib u laabteen, kadib markii ay iska caabin kala kulmeen Ciidamada Dowladda oo ku jiray diyaar garow buuxa.
Xaalada Basra ayaa caawa waxa ay tahay mid degan, waxaaana Ciidamada Dowladda Fedraalka ay wadaan dhaq dhaqaaq Ciidan, oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee degaanka.
Degaanka Basra ayaa ka mid ah degaano Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay Todobaadkan kala wareegeen ururka Al-shabaab, oo ku yaalla Shabeellooyinka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Buulo-Kuuto, Daniga Baalow iyo Degaanka Jabaluul.